Ihe Ị Mkpa Ịmata banyere Imelite ka iOS 9
E nwere ọtụtụ ihe ndị i kwesịrị ịma tupu ị na-agbali imelite ka iOS 9. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga iji lebara ihe ndị kasị mkpa ka-enyere gị aka kwalite ka iOS 9 n'enweghị. Ka-amalite na ihe ndị kasị mkpa.
Part1: ndabere gị iPhone / iPad
Part2: Kwadebe ọrụ
Part3: 2 ụzọ imelite ka iOS 9 gị iPhone / iPad
Part4: Nsogbu ị nwere ike ịbịara n'oge iOS 9 update
Part 1. ndabere gị iPhone / iPad
Ị chọrọ nwere ndabere nke ihe niile na gị iPhone ma ọ bụ iPad dị nnọọ bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi n'oge update usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndabere nile data na ngwaọrụ gị, i kwesịrị iji iTunes ma ọ bụ iCloud. N'ezie gị iPhone ma ọ bụ iPad eleghị anya ugbua akpaghị aka mmelite ngwaọrụ gị na iTunes ma ọ bụ iCloud.
Ọ bụrụ na ị Otú ọ dị chọrọ a ngalaba nke gị data (ikekwe kasị mkpa data) i kwesịrị iji na ngwa na-enye gị ohere iji họrọ data ị chọrọ ndabere. Wondershare Dr. Fone maka iOS bụ ezigbo ngwa iji ndabere data ebe ọ enye gị ohere ịhọrọ ihe ị chọrọ ndabere.
Part 2. Jikere ọrụ
Ozugbo i nwere gị data na ntukwasi-obi kwadoo, ka na-amalite usoro nke emelite ka iOS 9.
Ezigbo Ike Tụkwasịnụ: emelite gị iOS ga-ewe oge na mkpa ka i nwere ezigbo ike iji hụ na nkwado ndabere na mpaghara a ga-dechara nke ọma. Ọ na-atụ aro na n'ihu gị ibido mmegolite, ị kwesịrị ị nwere dịkarịa ala 60% ike ọkọnọ dị.
Anụ Network Environment: iOS 9 ga-mkpa-ebudatara site na internet. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na ị nwere anụ netwọk ọkacha mma Wi-Fi tupu agbali ibudata update. Otú a ị nwere ike na-ekwe nkwa na download agaghị uloanumaanu midway.
Enough Space: Gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ gị nwere ezigbo ohere nchekwa tupu ị malite na download. Nke a bụ iji hụ na faịlụ ebudatara maka update niile ga-chọta ezu ohere maka nchekwa tupu echichi na na gị melite agaghị uloanumaanu kara aka enweghị ohere.
iOS 9 ga-arụ ọrụ ndị na-esonụ ngwaọrụ
Ọzọ iPhone 6
iPad 3rd Ọgbọ
iPad 4th Ọgbọ
iPad Obere 2
Part 3. 2 ụzọ imelite ka iOS 9 gị iPhone / iPad
Ugbu a na anyị na-ọma kwadebere maka mmegolite, ka anyị hụ ụzọ abụọ ị nwere ike imelite ka iOS 9 n'ụzọ dị irè.
Ngwọta 1: Update ka iOS 9 na na ngwaọrụ gị
Ihe kacha ụzọ imelite ngwaọrụ gị bụ "ihe karịrị ikuku" ma ọ bụ eriri. Nke a bụ n'ihi na, ị na-adịghị mkpa nwere ọ bụla ọzọ software mezue nweta nkwalite na ọ bụ ngwa ngwa na irè. A bụ otú.
Nzọụkwụ otu: Ikwunye ngwaọrụ gị n'ime a ike isi iyi iji hụ ị ga-enwe ezigbo ike n'ihi na update.
Nzọụkwụ Abụọ: On ngwaọrụ gị, enweta na Ntọala> Ozuruọnụ> software update
Nzọụkwụ atọ: enweta na "download na wụnye." The download usoro ga-amalite ozugbo bụrụhaala na unu jikọọ a Wi-Fi netwọk na na ekwentị gị nwere ezigbo ike.
Nzọụkwụ anọ: Pịa na Wụnye ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na ị pịa wụnye, nwụnye usoro ga-amalite ozugbo. Ọ bụrụ na ị nwere ngafe-koodu, i nwere ike mkpa iji tinye ya n'ihu update nwere ike arụnyere.
Ngwọta 2: Update ka iOS 9 iji iTunes
Nzọụkwụ otu: Wụnye ọhụrụ version nke iTunes na kọmputa gị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ama nwere ya na mgbe ikwunye na ngwaọrụ gị gị na kọmputa.
Nzọụkwụ Abụọ: na iTunes họrọ ngwaọrụ gị na nchịkọta ebi ndụ, pịa "Lelee maka mmelite"
Nzọụkwụ atọ: na nke pụrụ ịkpata window pịa Download na Update.
Ị nwere ike na ihichapụ ụfọdụ aka nke ị na-adịghị ezu ohere nchekwa na ngwaọrụ gị.
Part 4. nsogbu ị pụrụ ezute n'oge iOS 9 update
E nwere ọtụtụ nsogbu na ị na ndị yiri ka na-eche ihu mgbe nbudata ọhụrụ iOS 9. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị agụnye;
Software update okpu njehie ozi na i nwere ike inwe mgbe ị na-agbalị ibudata update.
Gị iPhone nwere ike ina rapaara na Apple Logo n'oge iOS 9 update otú igbochi gị site na-emecha usoro.
Ngwaọrụ gị nwere ike ina rapaara na "verifying update" mgbe ị na-agbalị imelite
Gị na-enwe Wi-Fi Njikọta mbipụta
Ọnwụ nke data mgbe mmegolite
Ngwaọrụ gị na-rapaara na mgbake mode
Ị na-adịghị ezu ohere ibudata iOS 9
Ozi ọma ahụ bụ na ihe nile nke nsogbu ndị a nwere ngwọta. Ụfọdụ n'ime ha bụ dị mfe dị ka kwesịrị ekwesị nkwadebe tupu wụnye gị iOS 9 update. Ọ bụrụ na ị na-enwe onye ọ bụla n'ime n'elu mbipụta na mkpa a otu nkwụsị ahịa ihe ngwọta, anyị hụrụ nri unu ebe. Isiokwu a na-enye gị ihe na-omimi nkọwa nke nsogbu nile i nwere ike na-ezute na otú idozi ha.
> Resource> iPhone> Ihe mkpa ka ị mara banyere Imelite ka iOS 9